D&D မှာ အလကားရလို့ ကယ်ရီကေးချား ဆွဲခိုင်းလိုက်တာပါ။ နမူနာပြထားတဲ့ ပုံမှာတော့ ဂျက်ကီချန်းပုံကို ဆွဲထားတာ တူသား။ အခုကျတော့ ပန်ဒိုရာနဲ့ တူလို့လား..။
(အရိပ်အမြွက်။ ။ ဟဲဟဲ တူရင် ဒီမှာ ဘယ်တင်ပါ့မလဲ။)
Posted by pandora at 9:36 AM
နည်းနည်းတော့ တူမှာပေါ့ .. ဟဲ ဟဲ ... :P
it looks exactly the same!!! :-)
တူပါသကွဲ့ မယုံငြား ...
အင်း ... အဲ ...
မြင်ဖူးမှ သိမယ်ဗျား ...း)
yes...Myin Bu mha know mhar pe`...
If this pic look like ma pan, you must be the pretty one who has good mind. :P Tha ball kaung tae` poan pauk tae` byo..
ဟင် လုံးဝမတူဘူး ။ အဲဒီလူ ညံ့တယ် ။
NOOOOOOO.. NO WAY, NOT EVEN Close AT ALL, the artist destroyed your "actress" look
(remember the day I waited for you at the bus stop? - you were wearing jeans and Shirt .. walked towards to the bus stop like an actress, breeze brushed your hair locks and you looked like those actresses pictured in slow motion)
h`h` .. Marketing Promotion, That's it! Treat Me .. ASAP
မတူဘူး ဒေါ်လေးက စိုးမြတ်နန္ဒာလှိုင် နဲ့ တူတယ်ဆိုတာ သိတယ် ဟီးး ရမ်းခွပ်တား)
ဟားဟား စု ပြောတာ ထောက်ခံပါတယ် ထောက်ခံပါတယ် ။ Can I getatreat too? :D Pls make sure it's not at McDonald's hehe.
ဒကယ် တူတူ.. မတူတူ...
တူနယ် ဗြောင်...(ဒါ အပျော် ဆိုင်းတီးတာ)
ထောက်ခံတယ် စုပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။ ဂျစ်တူးပြောသလို ထောက်ခံရင် စားရမှာလား?
အမပန်ကို မြင်မှမမြင်ဖူးတာ။ နဲနဲတော့တူမှာပေါ့ :)
သြော်…ပန်ဒိုရာဆိုလို့ဘယ်သူများမှတ်တယ်….သူကိုး………သိသွားပြီပန်ရေ…..
ကယ်ရီကေးချား ဆိုတာ ထင်ရှားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို အသားပေးပြီး အနည်းနဲ့ အများ တူတော့ တူအောင် ဆွဲတတ်ကြတာမျိုး မဟုတ်လား...
ဖေါ်ပြပါ ပုံကလေးဟာ မမပန်ဒိုရာနဲ့နဲနဲပါးပါးတော့ တူတန်ကောင်းရဲ့ လို့ မျှော်လင့်ကြည့် ရတာပါဘဲလေ...
တူဘူးလားဟင် ဟုတ်လား ပုံကပိုများ ချောနေသလား ဟုတ်မယ်ထင်တယ် အဟက်ဟက်ဟက်
မပန်ရေ.. စင်ကာပူလာဖြစ်ရင် ဒီပုံလေး ဓာတ်ပုံထုတ်လာပြီး ယူလာခဲ့မယ်။ ပုံထဲကနဲ့ ဆင်တဲ့သူတွေ့ရင် မပန်ကို သိလားလို့ မေးလို့ရတာပေါ့.. ဟုတ်ဘူးလား.. :)